I-Decatur, IL • Ukugcotshwa komzimba ne-NuRu Massage
Khetha imodeli yesilayidi sakho seNuru ezinkulungwaneni zochwepheshe bomzimba wokuhlikihla kuRubPage.com.
IDecatur idolobha elikhulu kunawo wonke kanye nesihlalo sesifunda saseMacon County esifundazweni sase-Illinois sase-Illinois, esinabantu abangama-76,122 njengokubalwa kwabantu ngo-2010. Idolobha lasungulwa e1829 futhi lakhiwe ngasemfuleni iSangamon naseLake Decatur eCentral Illinois. Isibalo esilinganisiwe sikaDecatur sango-2018 sasingu-71,290. Khetha ifayela lakho le- Isilayidi sikaNuru imodeli kusuka ezinkulungwaneni ze hlikihla umzimba ochwepheshe ku- RubPage.com.